WebThings Gateway 0.11 Inosvika neRutsigiro rweMamwe Mitauro uye Zvimwe | Linux Vakapindwa muropa
WebThings Gateway 0.11 inosvika nerutsigiro rwemimwe mitauro uye nezvimwe
Vagadziri ve Mozilla vanoona nezvekuvandudza WebThings Gateway yakazivisa kuburitswa kweshanduro nyowani ye "WebThings Gateway 0.11" iyo inouya neakawanda akateedzana ekuvandudza akatarisana neiyo interface
WebThings Sisitimu inopa seti yezvinhu zvinotsiviwa kugadzira maIoT zvishandiso iyo inogona kupindirana yakananga uchishandisa iyo Webhu Zvinhu API. Midziyo yakadaro inogona kuwanikwa otomatiki neWebThings-based gateways kana software yemutengi (uchishandisa mDNS) yekutarisa inotevera uye kutonga kuburikidza neWebhu.
Kunze kweizvozvo iwe unogona kushandisa ZigBee uye ZWave protocols, WiFi kana iyo yakananga kubatana kuburikidza neGPIO kusangana neIoT mapuratifomu. Firmware Gateway yakagadzirira mhando dzakasiyana dzeRaspberry Pi, Debian mapakeji aripo zvakare.
1 Chii chitsva muWebThings Gateway 0.11?
Chii chitsva muWebThings Gateway 0.11?
Nokuburitswa kweiyi vhezheni itsva yeWebThings Gateway 0.11, zvinonzi izvo interface ye chikuva chakagamuchirwa kune vasiri-vanotaura chiRungu vashandisi se shanduro dzemitauro makumi maviri nemaviri dzakawedzerwa.
Zvakare, ivo vanogadzira vanotaura izvozvo Tsigiro yemapuratifomu ayo akaiswa mapakeji ekuwedzera akawedzerwa.
Zvakanaka, kuwedzera kune yakasarudzika uye inozivikanwa mifananidzo inogadzirwa yeRaspberry Pi uye Docker, izvozvi mapakeji akaumbirwa kumisikidzwa kwavo muDebian 10, Raspbian, Ubuntu 18.04, 19.04, 19.10 uye Fedora 30/31 uye zvakare mapakeji eArch Linux iyo inogona kuwanikwa kubva kuAUR repository. Uye pasina kuverenga zvigadzirwa zveizvi zvinobatsira.
Kune rumwe rutivi zvinotaurwa kuti chiitiko chekunyoresa chiitiko chakasimbiswa iyo inounganidza manhamba pamusoro pekushanda kweese maIoT zvishandiso uye maseru mune yepamhepo network uye inobvumidza kuongorora kwavo chiitiko muchimiro chekuona magirafu.
Semuenzaniso, unogona kutsvaga kuti kangani masuo akavhurwa uye akavharwa panguva yaunenge usipo, kuti tembiricha iri mumba yakashanduka sei, simba rakawanda sei raishandiswa nemidziyo yakabatana nema smart plugs, pakafambiswa detector yekufambisa, nezvimwe. Machati anogona kuvakwa mune mamiriro emaawa, mazuva, uye vhiki uye zvakapetwa pane imwe nguva chiyero;
Nezve iko kuyedza mashandiro emubatsiri wezwi iyo inobvumira kuziva nekuita mirairo yezwi akanzi akapara mhosva uye akabviswa, iyo ichabvisawo izwi rekudzora API kune inotevera vhezheni. Panzvimbo peakavakirwa-mukati izwi mubatsiri, zvinokurudzirwa kushandisa mapulagi ane akafanana mashandiro ayo anogona kuwanikwa mune Zvirongwa - Plugins chikamu.
Yeimwe shanduko dzinomira mukuzivisa kweshanduro iyi nyowani:
Wakawedzera imwe sarudzo yekumisa otomatiki kuendesa kweOTA meseji yekuvakira iyo Raspberry Pi.
Zvekuwedzera, iko kugona kuwana mitauro uye kwenzvimbo marongero anopiwa.
Wakawedzera kugona kuwana iyo webhu interface kubva kune mamwe masisitimu pane yemuno network pasina kunyorera (uchishandisa "http: //" pachinzvimbo che "https: //").
Kuvimbika uye kugadzikana kwePWA (Progressive Web App) kunowedzera, zvichikubvumidza kuronga basa rako newebhu webhu sechirongwa chakamira.
Kune avo vanofarira WebThings Gateway, vanogona kuiwana nenzira yakapusa. Ivo vanongoda kurodha pasi firmware yakapihwa kune iyo SD kadhi yeRaspberry yako Pi.
Saizvozvowo, ichave iri mukutarisira kwekutsvaga zviripo IoT zvishandiso izvo zvinokupa iwe mukana wekugona kumisikidza parameter yekunze kuwana uye kugona kuwedzera anofarirwa zvikuru zvishandiso kuchiratidziri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » WebThings Gateway 0.11 inosvika nerutsigiro rwemimwe mitauro uye nezvimwe
Pane here mapakeji akagadzirira OpenWrt? Ndinovawana kupi?
Kwete, chete zveRaspberry, Linux kana Docker
Saka nei wakanyora kuti kune mapakeji anowanikwa eOpenWrt?
Paive neyakaedzwa package yakavakirwa mukuunganidzwa kweRaspberry. https://github.com/openwrt/packages/tree/master/lang/node-mozilla-iot-gateway, asi ini ndakamira kushanda pariri sezvo ini ndanga ndichitsvaga kuti nei ndaona kuti zvaikonzerwa nematambudziko makuru akagadzirwa.
Iyo pasuru yakavakwa yakazvimiririra kubva kune chirongwa. Ini ndinokumbira ruregerero sezvo ini ndaingo tarisa pane hukuru hwekuvandudza uye ndakarasa rondedzero ye openWrt package.
Ndiri kuiyedza pane yekare Raspberry Pi B 2.0 uye chirongwa ichi chakanyanya kunaka, ndinovimba vanoramba vachichipurudzira zvakanyanya.
Tinogona ikozvino kurodha VirtualBox 6.1.4, iine hukuru hukuru hwerutsigiro ruzere rweLinux 5.5